धोनीले क्रिकेटको प्रशासकीय निकायबाट केन्द्रीय करारपत्र नपाउँदा…. « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
धोनीले क्रिकेटको प्रशासकीय निकायबाट केन्द्रीय करारपत्र नपाउँदा….
प्रकाशित मिति : २०७६, २ माघ बिहीबार २१:२०
खुल्ला मिनी म्याराथनको उपाधि बुढालाई
लमजुङ । लमजुङमा भएको प्रथम खुल्ला मिनी म्याराथन प्रतियोगिताको उपाधि जुम्लाका दुर्गाबहादुर बुढाले
काठमाडौं । मनाङ मस्र्याङ्दीले संकटा क्लबसँग अंक खोस्न सफल भएको छ । शनिबार
यु–१९ क्रिकेटको उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीबीच भिडन्त हुने
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमाथि ८ विकेटको शानदार जित निकाल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानीमा जारी
काठमाडौं । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिताअन्र्गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको तेस्रो